ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စုဝေးဟောပြောခြင်းနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ဆိုင်ရာတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း | Ministry Of Information
Sun, 09/09/2018 - 19:37 -- admin
ကြေညာချက်အမှတ် (၁၂၁ / ၂၀၁၈)
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၃ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်)
၁။ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံရန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အသီးသီးက လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်အတည်ပြု ကြေညာ ထားသည့် နိုင်ငံရေး ပါတီကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သို့မဟုတ် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိရေးအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှု ရှိစေရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ၁. ၇. ၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁ / ၂၀၁၄) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီများ အားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရေးဆွဲထားသော နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ် (Code of Conduct for political parties and candidates) ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ကာလကို ရက်ပေါင်း ၆၀ (၃.၉.၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၀၆၀၀ နာရီမှ ၁.၁၁. ၂၀၁၈ ရက်နေ့ ည ၁၂၀၀ နာရီအထိ) ခွင့်ပြုပါသည်။
၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော၊ အေးချမ်းသာယာသော ရွေးကောက်ပွဲများ ဖြစ်စေရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စုဝေးဟောပြောခြင်းနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း တို့ကို အထက်ဖော်ပြပါ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၄)၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်တို့နှင့်အညီ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကြပါရန် အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။